Retired General Sibusiso Moyo is the current Minister of Foreign Affairs. (ZBC via AP)
Some Zimbabweans on Friday nearly manhandled Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and some senior state officials on Friday on the sidelines of the Global Conference for Media Freedom held at Chatham House in London.
Irate protesters, demanding the release of Movement for Democratic Change vice chairperson Job Sikhala facing charges of subversion and other MDC activists, pushed and shoved some of the state officials before one of them splashed water on Moyo, who jumped into a Zimbabwe Embassy vehicle before it sped off.
“The attacks have not, however, disrupted Minister S. B. Moyo’s successful engagements in the UK in any way … The government of Zimbabwe remains committed to peaceful dialogue with all parties, with a view to building the country around shared values, including the principles of respectful disagreement and nonviolence. Government affirms that right of Zimbabweans to protest, but to do so peacefully.”
At least 22 people, including Sikhala, are currently facing charges of subversion in Zimbabwe.